Ntuziaka gị maka ịmepụta usoro nbipute ntụkwasị obi na YouTube iji mee ka ndị na-ekiri ya dịkwuo elu - YTpals
Enwere ọtụtụ akụkọ na blọọgụ na-adụ ọdụ ndị na-emepụta ọdịnaya YouTube ka ha bipute vidiyo mgbe niile site na ịrapagidesi ike na nhazi nhazi. Agbanyeghị, enweghị ọtụtụ ozi gbasara otu onye nrụpụta ọdịnaya nwere ike isi mepụta usoro nbipute maka ịga nke ọma. Ọ bụrụ na ị dịtụ ọhụrụ na ihe nkiri YouTube, gụọ n'ihu. Na post a, anyị ga-eso gị kerịta ndụmọdụ niile ị nwere ike itinye n'ọrụ maka ịhazi ọdịnaya YouTube na-enye nsonaazụ siri ike.
Jiri njirimara ugboro ntinye YouTube
Ọ bụrụ na ịchọghị ịmepụta usoro nbipute zuru ezu, ị nwere ike iji njirimara ugboro ntinye YouTube nke ikpo okwu na-enye ndị na-emepụta ọdịnaya. Ị nwere ike tweak ntọala site na iji njirimara a mgbe ị na-ebugo otu vidiyo a ga-ebipụta. Ka vidiyo gị na-ebugote, ị ga-etinye nkọwa dị iche iche iji mechaa guzobe vidiyo maka ibipụta. Nke a bụ mgbe ị ga-ahụ taabụ 'Visibility', nke ga-enye gị ohere ịhazi oge maka ibipụta vidiyo gị.
Mepụta usoro nbipute ga-adabara gị
Ọtụtụ ndị na-emepụta ọdịnaya na YouTube ugbu a na-ebipụta ọdịnaya kwa ụbọchị iji kwalite echiche ha na ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha ha. Agbanyeghị, naanị n'ihi na onye ọ bụla na-ewepụta ọdịnaya kwa ụbọchị apụtaghị na ị ga-emerịrị ya. N'ezie, ọ bụrụ na ị nwere ike ịnọgide na-enwe ogo dị elu na-ebugote oge niile, gaa n'ihu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ ga-aka gị mma ibipụta vidiyo 1 ma ọ bụ 2 kwa izu, nke ahụ bụ ihe ị kwesịrị ịrapara na ya. Cheta, achụla àgwà ọma maka oke - ọ nwere ike inye gị nsonaazụ n'oge dị mkpirikpi, mana ị ga-atụfu ndị na-ekiri gị n'ikpeazụ.
Mee ihe kacha mma na YouTube Studio
YouTube Studio bụ atụmatụ na-enye ndị na-emepụta ọdịnaya ohere ijikwa ọdịnaya ha nke ọma na enweghị nkebi. Ewezuga inye ọtụtụ atụmatụ njikwa ọdịnaya, YouTube Studio na-enyekwa ndị na-emepụta ọdịnaya nghọta na arụmọrụ vidiyo ha. Nghọta ndị a na-enye ọtụtụ nkọwa dị mkpa, gụnyere oge a na-elele vidiyo gị kacha. Isochi ozi a dị mkpa, n'ihi na ọ ga-enye gị ezigbo echiche gbasara oge kacha mma ibipute na YouTube na 2022.
Buru n'uche maka ịdịgidesi ike karịa ihe niile
Ọ bụrụ na ị bụ ụdị YouTuber nke nwere ike ibipụta naanị otu vidiyo kwa izu, echegbula onwe gị maka ọnụọgụ vidiyo ebipụtara ị ga-enye. Kama, anyị na-akwado ilekwasị anya na nkwụsi ike, nke ga-eme ka ndị na-ekiri gị nwee atụmanya ziri ezi n'aka gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ebipụ vidiyo na Mọnde ọ bụla, ị kwesịrị ijide n'aka na ọ ga-abịa, ọ gaghị enwe Monday ga-agafe ma ị buliteghị vidiyo. Nke a ga-enyekwara gị aka isetịpụ ihe mgbaru ọsọ ezi uche dị na ya maka onwe gị - ebumnuche ndị ị nwere ike imezu na tụọ.
Chekwaa ụfọdụ echiche maka YouTube Shorts na YouTube Live kwa
Otu oge, YouTube kwere ka ndị na-emepụta ọdịnaya bipute otu ụdị vidiyo, mana ụbọchị ndị ahụ agaala. Ugbu a, YouTube na-enye ụdị ọdịnaya dị iche iche, gụnyere Shorts na Live. YouTube Shorts pụtara dị ka onye na-asọ mpi TikTok na Instagram Reels na-aga nke ọma, ọ na-enye ndị na-emepụta ọdịnaya ohere ịgbanwe onyinye ọdịnaya ha. YouTube Live bụkwa ụzọ mara mma maka ndị na-emepụta ọdịnaya iji bịaruo ndị na-eso ha nso. Yabụ, mgbe ị na-eke usoro nbipute, mepụta usoro dị iche iche maka YouTube Shorts na YouTube Live.
Ọ bụrụ na ị chọrọ free YouTube ngosi iji nweta ọwa gị ka ọ malite na-efe efe, gịnị ma ị tụlee iji ọrụ kachasị dị ka YTpals. Ewezuga echiche efu na mmasị, YTpals na-enyekwa ndị okike ọdịnaya ohere zụta ndị debanyere aha YouTube.
Ntuziaka gị maka ịmepụta usoro nbipute ntụkwasị obi na YouTube iji welie ndị na-ekiri ya nke ndi edemede YTpals, 24 January 2022
Usoro 5 maka nchịkọta YouTube nke dị mkpa n'ezie
N'ihe banyere ahia YouTube, enwere otutu usoro nyocha nke mmadu nwere ike idobe. Usoro ndị a na-enye anyị nghọta miri emi banyere etu anyị si ere ahịa na YouTube yana ihe anaghị aga nke ọma…